Ra'iisal Wasaare Xasan Cali Khayre oo mooshin laga geeyey Aqalka Sare iyo Guddoonka oo qabtay | SAHAN ONLINE
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre oo mooshin laga geeyey Aqalka Sare iyo Guddoonka oo qabtay
MUQDISHO – Guddoomiyaha aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa fadhigii maanta ka yeeshay in mooshin laga keenay Ra’iisal Wasaare Khayre.
Gudbinta mooshinkan waxaa hormuud u ahaa Muuse Suudi Yalacow kaasoo ujeedkiisu yahay in Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre wax laga weydiiyo xiisada Hirshabeelle iyo go’aankii Xukuumadu ka qaadatay.
Guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in Ra’iisal Wasaaraha xilli kasta loo yeeri karo isla markaana diyaar u yahay in uu hor-yimaado,waxaase ka muuqatay in uu yara dhaliilsanaa qaabka mooshinka looga soo gudbiyey.
Ra’iisal Wasaare Khayra ayaa lagu wadaa in uu hortago Gollaha aqalka sare,si su’aalo looga weydiiyo tallaabadii Xukuumaddiisa ugu taageertay go’aankii Baarlamaanka Hirshabeelle xilka uga qaadeen Cali Cosoble.
Illaa hadda lama sheegin xilliga uu hor-imaanayo Aqalka sare,wuxuuse noqonayaa mooshinkii u horeeyay ee aqalka sare laga geeyo Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya.
Gollaha aqalka sare ee Baarlamaanka ayaa sabtidii u yeeray Wasiiro ka tirsan Xukuumadda kuwaasoo safar xaqiiqo raadin ah ku tagay magaalada Jowhar kadib markii ay soo ifbaxday khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya maamulka Hirshabeelle.